Naqshad elektaroonig ah (Qaabdhismeedka & Qorshaha PCB) - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax tech waa shirkad lagu kalsoon yahay oo bixisa abaabul ballaaran oo Adeegyada Naqshadeynta Elektarooniga ah oo in ka badan 10 + sano oo khibrad ah u leh aagagga ku habboon ee Naqshadeynta Elektarooniga.
Waxaan naqshadeynaa, tusaalaynaa oo horumarinnaa qalabka elektaroonigga ah ee kala duwan qaab habeysan oo aad u saxsan. Waxaan awood u leenahay inaan u bedelno fikradahaaga ama aan u bedelno jaantus shaqeynaya wareegga elektarooniga ama sheyga ka caawin kara qalabka elektarooniga ah inuu qabto shaqooyinkiisa Iyadoo ay la socdaan koox injineero aqoon u leh, waxaan dhiseynaa naqshad elektaroonik ah oo cajiib ah.
Injineernimada Fumax waxay la shaqeysay in ka badan 50 macmiil iyadoo si guul leh loo dhameystiray in ka badan 100 nashqadaha wareegga elektiroonigga ah. Khibraddani waxay u oggolaatay fumax injineernimada inay horumariso koox injineero sare ah oo heegan ah oo loogu talagalay naqshadaynta wareegga elektarooniga ah (injineernimada hore-dhamaadka) guud ahaan codsiyada ballaaran.
Kala duwanaanta codsiyada naqshada elektarooniga ah waxaa ka mid ah:
• Xakameynta nashqadeynta nidaamka
• Koontaroolka mootada
• Xakameynta warshadaha
• Elektiroonigga macaamiisha
• Naqshado isku dhafan oo analog / digital ah
• Bluetooth iyo 802.11 naqshadaha bilaa-waayirka ah
• Naqshadeynta RF ilaa 2.4GHz
• Wareegyada xiriirka ee Ethernet
• Naqshadeynta korantada
• Naqshadeynta naqshadeynta mikroroscessor
• Naqshadaha wareegga isgaarsiinta
Nidaamkeena horumarinta naqshadeynta elektiroonigga wuxuu caadi ahaan ku lug leeyahay tallaabooyinka soo socda:
1. Baro shuruudaha macaamiisha
2. Kala hadal macaamiisha shuruudaha muhiimka ah una soo jeedi xalka hordhaca ah
3. Abuur mashruuc bilow ah oo ku saleysan baahida macaamiisha
4. Nidaamka xaqiijinta qorshaynta gudaha ee hogaamiyaasha kooxda injineernimada Fumax
5. Nidaamka ka-qaybgalka kooxda injineernimada barnaamijka haddii loo baahdo.
6. Kombuyuutarku wuxuu kiciyaa habka
7. Dhameystir qorshaha. Tag nidaamka PCBA
Waxaan u adeegsanaa warshadaha hogaaminaya aaladaha naqshadeynta E-CAD sida Altium Designer & Autodesk Fusion 360 (Autodesk Eagle) si aan ula macaamilno naqshadaheena PCB. Tani waxay u xaqiijineysaa macaamiisheenna inaan gaarsiinno nashqado aan ahayn oo keliya heerka warshadaha laakiin sidoo kale u oggolaanaya dayactirka fudud ee shaqada loogu talagalay.